Shabaab oo siyaabooyin kala duwan fagaare ugu toogtay 24 qof | Dhacdo
Home Wararka Maanta Shabaab oo siyaabooyin kala duwan fagaare ugu toogtay 24 qof
Shabaab oo siyaabooyin kala duwan fagaare ugu toogtay 24 qof
Ururka Al Shabaab ayaa tan iyo Axaddii waxay xukuno dil ah ku fuliyeen afar iyo labaatan qof oo midi ay haweeney tahay, ka dib markii ay ku eedeeyeen basaasnimo.
Al Shabaab ayaa gelinkii dambe ee maanta waxay fagaare ku yaala deegaanka Kuunya Barrow ee Gobolka Shabellaha Hoose ku toogatay sideed nin, oo sida ay sheegtay u shaqeynayay Sirdoonada Mareykanka iyo Somaliya.
Qaadiga Maxkamadda Al Shabaab ee Gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegay in toddobo ka mid ah raggaasi ay la shaqeynayeen Sirdoonka Mareykanka, halka kan kalena uu la shaqeynayay Hay’adda NISA.
Sidoo kale Shabaab ayaa Talaadadii shalay shan nin ku toogtay fagaaraha deegaanka Buulo Fulaay ee Gobolka Baay, kuwaa oo ay ku eedeeyeen inay horey u fududeeyeen duqeymo uu Mareykanku ka gaystay deegaanada ay maamulaan.
Galabnimadii Isniinta, shan nin oo falal basaasnimo lagu eedeeyay ayay Shabaabku ku toogteen Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe. Qaadiga Maxkamadda Al Shabaab ee Gobolada Jubbooyinka ayaa fagaarahaasi ka sheegay in raggaasi ay u shaqeynayeen Sirdoonada Mareykanka iyo Ingiriiska.
Gelinkii dambe ee Axaddii ayay ahayd markii lix qof oo kale ay Shabaabku ku toogteen fagaare ku yaala Degmada Saakow ee Gobolka Jubbada Dhexe. Lixdaasi qof ee la toogtay oo midi ay haweeney ahayd waxay Shabaabku ku eedeeyeen inay u shaqeynayeen Hay’adda Sirdoonka Mareykanka ee CIA.
Shabaabka ayaa bilaabay inay dadkan toogtaan, saacado ka dib markii Puntland ay Axaddii xukun dil ah ku fulisay kow iyo labaatan nin, oo ay ku heshay Shabaabnimo iyo inay dilal iyo qaraxyaba ka gaysteen deegaanadeeda.
Waa markii ugu horeysay oo maalmo xiriir ah ay Shabaabku xukuno dil ah ku fuliyaan dad ay markaasi ku eedeynayaan inay ku howlanaayeen falal basaasnimo.
Previous articleTaliska Booliska oo Magaalada Muqdisho ku soo bandhigay lix nin
Next articleRooble oo sheegay 61 sano ka dib baahida ugu weyn ay tahay midnimo iyo wadajir